Apple waxay raadineysaa Sameeyaal Dheeraad ah oo Mini-LED ah oo loogu talagalay Macaamiisha Soo socota ee MacBook | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay raadineysaa Sameeyaal Dheeraad ah oo Mini-LED ah oo loogu talagalay Macaamiisha Soo socota ee MacBook
Marka dhammaan soo saarayaasha caalamiga ahi ay aad u doonayaan inay yeeshaan semiconductors si ay ugu dhejiyaan qalabkooda, waxaa soo baxday in Apple ay u baahan tahay xayndaabyo dheeri ah mini LED. Kuma filna soosaarka wax soo saarayaasheeda hadda, waxayna raadineysaa soosaarayaal cusub oo awood u leh inay qanciyaan dalabkooda.
Tani waa dhibaatada Apple hadda haysato, maadaama ay bilaabeyso isbeddelka qalabkeeda ka imanaya qaybaha OLED illaa shaashadda mini-LED. Ayaa kubilaabmay kuwii horey loo sii daayay 12,9-inji iPad Pro, oo wuxuu rabaa in uu ku dhegto MacBook-yada soo socda.
Apple waxay haysataa arrimo yar-yar oo soo-bandhig ah oo loogu talagalay soo-bandhigga cusub ee 12,9-inch iPad Pro iyo bandhigyada soo socda MacBook Pro, taasoo ku kalliftay shirkadda inay bilawdo inay raadsato alaab-qeybiyeyaal dheeri ah iyadoo isku dayaysa inay wax ka qabato sheegtay in aysan jirin wax saad ah.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen DigiTimesApple waxay raadineysaa alaab-qeybiyeyaal cusub si ay ugu dhejiso qalabka korontada ee looxyada wareegyada ah ee loogu talagalay muuqaalka mini-LED ee 12,9-inch iPad Pro iyo soo socda MacBook Pros oo sugaya sii deynta.
Hal adeeg bixiye oo culeys badani saaran yahay
DigiTimes ayaa hore u soo warisay taas TSMT ayaa sii ahaan doonta bixiyaha kaliya ee SMT (dusha sare teknolojiyadda) ee iPad Pro iyo kan soo socda ee MacBook Pro. Tan iyo markii warbixintaas, si kastaba ha noqotee, Apple waxay umuuqataa inay bedesho aragtideeda xaaladda, suurtogalnimada inay ogaato baahida loo qabo iPad Pro 12,9-inch iyo dalabka la filayo ee MacBook Pro ee soo socda ayaa laga yaabaa inuu ka bato awooda hal iibiya.
Ka dib markii la bilaabay, 12,9-inch iPad Pro ayaa si cadaalad ah ugu xaddidan kaydka, iyada oo waqtiyada maraakiibta la bilaabayo bisha Abriil ay yimaadeen bartamaha illaa dhammaadka Abriil. julio. Sababtoo ah maqnaanshaha joogtada ah sababo la xiriira faafida iyo semiconductor-ka adduunka oo dhan, waxaad ku dartaa yaraanta kumbuyuutarrada yar-yar ee loo yaqaan 'LED-yada' ee loogu talagalay soo-saarka MacBook-ga soo socda Dhibaato aad u daran Apple.
12,9-inch iPad Pro oo leh processor-ka M1 ayaa ahaa badeecadii ugu horreysay ee Apple ee shaashadda soo bandhigta Dareeraha dareeraha XDR iyada oo ku saleysan tiknoolajiyada mini-LED, halkii laga isticmaali lahaa LCD dhaqameed ama OLED. Apple waxaa la filayaa inay ku darto tiknoolajiyaddan isla barnaamijka casriga ah ee loo yaqaan 'MacBook Pros' kaas oo bilaaban doona sannadkan gudihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Apple waxay raadineysaa Sameeyaal Dheeraad ah oo Mini-LED ah oo loogu talagalay Macaamiisha Soo socota ee MacBook
14-inch iyo 16-inch MacBook Pro mini-LEDs ayaa laga yaabaa inay bilaabaan bisha Sebtember
12x36 Podcast: AirPods, OLED iyo Betas